Akhriso Howlgalladii Ugu Dambeeyay Ee Xarakada Shabaabul Mujaahidiin+Khasaaraha. – Bogga Calamada.com
Akhriso Howlgalladii Ugu Dambeeyay Ee Xarakada Shabaabul Mujaahidiin+Khasaaraha.
Ciidamada xarakada Mujaahidiinta Al-shabaab ee ka howlgala wilaayaadka dhaca koonfurta dalka Soomaaliya waxay fuliyeen howlgallo siyaabo kala duwan loogu beegsaday ciidamada Shisheeye iyo kuwa Soomaaida.
Howlgalka koowaad oo ahaa dagaal toos ah waxay ciidamada xarakada Mujaahidiinta Al-shabaab ku qaadeen saldhigga ciidamada dowladda ay ka samaysteen degmada Baardheere ee wilaayada Gedo. waxaana halkaas ka dhacay dagaal culus oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan.
Ilo wareedyo muhiim ah waxay xaqiijiyeen in weerarkaas lagu dilay hal askari oo lagu magacaabi jiray Maxamed Farey iyo dhaawac saddex kale oo lagu kala magacaabo Rooble. Jawaan iyo Farxaan.
Dhanka wilaayada Sh/hoose waxay ciidamada shabaabul Mujaahidiin qarax culus la beegsadeen hoyga uu degmada Afgooye ka degan yahay madaxa cashruuraha qaybta khudaarta degmada Afgooye ugu magacaaban dowladda Ridada ninka lagu magacaabo Mukhtaar Sagaar.
Ilo masuul ah waxay soo wariyeen in qaraxaas uu si dirqi ah kaga badbaaday sarkaalka la beegsaday balse waxaa halkaas ku dhaawacmay 3 ka mid ah ilaalada murtadka halka uu gabi ahaanba burburay guriga iyo gaarigii dhex yiillay ba.
Dhanka wilaayada Jubbooyinka waxay ciidamada jamhadda Mujaahidiintu weerar aad u xooggan ku qaadeen saldhigga ciidamada dowladda Kenya ay ka samaysteen deegaanka Jaziiradda Kudhaa ee dhaca xeebaha wilaayada Jubbooyinka.
Lama soo warin cadadka khasaare ee dagaalkan kasoo gaaray ciidamada Kenya maadaama uu dagaalku dhacay xilli habeen ah.
Dhanka kale ciidamo ka tirsan wilaayada islaamiga Bay iyo Bakool waxay weerar qorsheysan oo ay ka fuliyeen gudaha degmada Bardaale ku khaarajiyeen askari ka tirsanaa maleeshiyaadka maamulka isku magacaabay Koonfur galbeed.
Ilo dhanka deegaanka ah waxay soo wariyeen in wakhtiga uu howlgalku dhacayay uu askarigaas ku mashquulsanaa dhibaataynta dadka muslimiinta ah balse ciidamada Shabaabul Mujaahidiin oo si dhow ula socday dhaqdhaqaaqa askarigaas ayaa ugu dambayn goobta ku toogtay.
Howlgalladan ka kala dhacay wilaayaadka dhaca koonfurta Soomaaliya waxay kusoo beegmayaan xilli ciidamada shabaabul Mujaahidiin ay sii kordhiyeen howlgallada ka dhanka ciidamada shisheeye iyo maleeshiyaadka Soomaalida ee murtadiinta ah.